Afifide ne Mmoa ho Ɔbenfo Kyerɛkyerɛ ne Gyidi Mu | Nsɛm a wobisabisa
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Xhosa Zulu
NSƐM A WOBISABISA | DAVEY LOOS
Afifide ne Mmoa ho Ɔbenfo Kyerɛkyerɛ ne Gyidi Mu
Dɔkota Davey Loos yɛ afifide ne mmoa ho ɔbenfo wɔ Belgium. Bere bi a atwam no, na onnye Ɔbɔadeɛ bi nni, mmom na ogye adannandi di. Akyiri yi, ɔsesaa n’adwene. Dɛn na ɛmaa nhwehwɛmufo bi san susuw gyidi a na ɔwɔ wɔ nea ɛyɛe a nkwa bae no ho? Nyan! nsɛmma nhoma kyerɛwfo bisaa Dɔkota Loos nsɛm a ɛfa n’adwuma ne ne gyidi ho.
Ɛyɛɛ dɛn na wufii nyansahu nhwehwɛmu ase?
Bere a mekɔɔ sukuupɔn no, misuaa sɛnea wɔfra aduru. Ná m’ani gye ahoɔdennuru ne awosu mu nsu a emu nneɛma dɔɔso sen biara wɔ okyinsoroma yi so no ho paa. Bere rekɔ so no, m’ani begyee sɛnea adebɔ mu nneɛma nketenkete binom de owia hann yɛ adwuma no ho.
So na wugye Onyankopɔn di?
Bere a meyɛ abofra no, na migye no di. Nanso akyiri yi bere a na mewɔ Katolek Sukuupɔn mu wɔ Leuven no, wɔkyerɛkyerɛɛ me sɛ nneɛma a ɛwɔ nkwa nyinaa nam adannandi so na ɛbae. Na abenfo no kyerɛkyerɛ nneɛma yi bi mu ma asete yɛ den. Ná wɔyɛ nyansahufo a wɔaben, enti migyee nea wɔkae no dii. Awiei koraa no, ɛbɛyɛɛ den sɛ megye adi sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ.
Dɛn na ɛma wosan susuw nea nkwa fi bae no ho?
Wɔ afe 1999 mu no, mihyiaa m’adamfo bi a me ne no kɔɔ sukuu a na wabɛyɛ Yehowa Ɔdansefo, na me ne no kɔɔ wɔn asafo nhyiam no mu biako. Bio nso, wɔ saa bere koro no ara mu no, Yehowa Ɔdansefo bi baa yɛn fie na ɔmaa yɛn Is There a Creator Who Cares About You? * nhoma no biako.
Wuhuu nhoma no dɛn?
M’ani gyee nhwehwɛmu a ɛkɔ akyiri a na ɛwom no ho. Mifii ase susuw adwinni a ɛwɔ adebɔ mu no ho hwɛe sɛ adannandi kyerɛkyerɛɛ mu anaa.
Adebɔ mu adwinni bɛn na w’ani gyee ho?
Afifide ne mmoa ho adwuma a meyɛ no ma misuaa adwinni a ɛwɔ abɔde mu nneɛma nketenkete bi a ɛwɔ po mu a wɔn ankasa tumi yɛ wɔn aduan no ho ade. Nhwehwɛmufo bi susuw sɛ saa mmoawammoawa yi ne abɔde a nkwa wom a wodii kan baa asase yi so. Mmoawammoawa no twe owia mu ahoɔden na wɔfa anwonwakwan bi a ɛyɛ den sɛ yɛbɛte ase so ka nsu ne carbon dioxide bom ma ɛdan aduan. Sɛnea mmoawammoawa a ɛwɔ nsu mu no tumi twe owia wɔ ɔkwan a ɛkyɛn so yi so no nso ma me ho dwiriw me.
Nhabamma nso twe owia hann de yɛ wɔn aduan. Enti, dɛn na ɛyɛ nwonwa wɔ mmoawammoawa yi ho?
Bere a woredɔ asukɔ akɔ po ase nyinaa no, na owia hann a wuhu no so retew. Enti ɛsɛ sɛ mmoawammoawa a wɔwɔ po ase no tumi de wɔn nkatemmɛn a ɛyɛ adwuma anwonwakwan so no twe owia mu ahoɔden ketewa biara a wobenya. Na sɛ wɔde hann mu ahoɔden yi rekɔ baabi a wɔyɛ aduan yi a, ɛkame ayɛ sɛ ebiara nyera. Wɔn a wɔyɛ mfiri a wɔde twe owia mu ahoɔden no mpo ani abegye sɛnea nkatemmɛn yi te no ho. Nokwarem no, sɛ wode sɛnea mfiri a wɔde twe owia mu ahoɔden yɛ adwuma no toto mmoawammoawa yi nkatemmɛn no ho a, ɛne no nsɛ koraa.
Ɛno ma wusii gyinae bɛn?
Misusuw mfiridwuma ho animdefo a wɔbɔ mmɔden sɛ wobesuasua nneɛma bi a ɛkɔ so wɔ abɔde a nkwa wom mu no ho, na ɛma migye toom sɛ Onyankopɔn na ɔbɔɔ nkwa
Misusuw mfiridwuma ho animdefo a wɔbɔ mmɔden sɛ wobesuasua nneɛma bi a ɛkɔ so wɔ abɔde a nkwa wom mu no ho, na ɛma migye toom sɛ Onyankopɔn na ɔbɔɔ nkwa. Nanso ɛnyɛ nyansahu nkutoo na ɛma mibegye dii sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ. Bible no a metɔɔ me bo ase suae no nso ka ho bi.
Dɛn na ɛma wugye dii sɛ Bible no fi Onyankopɔn hɔ?
Ade biako a ɛma migyee Bible no toom ne emu nkɔmhyɛ ahorow a ɛba mu pɛpɛɛpɛ no. Sɛ nhwɛso no, Yesaia kaa Yesu wu ne ɔkwan a wɔbɛfa so asie no ho asɛm too hɔ mfehaha pii. Yenim sɛ wɔkyerɛw nkɔmhyɛ yi too hɔ ansa na Yesu rewu efisɛ Yesaia Nhoma Mmobɔwee a wohui wɔ Qumran no yɛ nea wɔhwɛɛ so kyerɛw bi bɛyɛ mfe ɔha ansa na wɔrewo Yesu.
Saa nkɔmhyɛ no ka sɛ: “Ne wu mu no, wobesie no wɔ abɔnefo ne adefo mu.” (Yesaia 53:9, 12) Nea ɛyɛ nwonwa no, wokum Yesu fraa nsɛmmɔnedifo, nanso wosiee no wɔ adefo asiei. Eyi yɛ nkɔmhyɛ ahorow a ɛbaa mu no mu biako a ɛma migye toom sɛ Onyankopɔn na ɔma wɔkyerɛw Bible no. (2 Timoteo 3:16) Akyiri yi, mebɛyɛɛ Yehowa Ɔdansefo.
Dɛn nti na w’ani gye ho sɛ woyɛ Yehowa Ɔdansefo?
Yɛn gyidi wɔ nnyinaso, na yemmmu yɛn ani ngu nyansahu so
Yɛn gyidi wɔ nnyinaso, na yemmmu yɛn ani ngu nyansahu so. Afei nso, Bible mu nnyinasosɛm na ɛkyerɛ yɛn kwan. Sɛ́ Yehowa Ɔdansefo no, m’ani gye sɛ mɛka Bible mu awerɛkyekyesɛm akyerɛ afoforo, na maboa wɔn ma wɔanya wɔn nsɛmmisa ahorow ho mmuae.
^ nky. 9 Yehowa Adansefo na wotintimii.
October 2013 | Nneɛma Abiɛsa a Sika Ntumi Ntɔ
NYAN! October 2013 | Nneɛma Abiɛsa a Sika Ntumi Ntɔ